Archive du 09-mai-2022
2 no maty, miha maro no voa Mitady hirongatra indray ny Coronavirus
Nisy olona miisa 2 indray namoy ny ainy indray vokatry ny coronavirus teo anelanelan’ny 30 aprily 06 mey 2022, araka ny tatitra navoakan’ny Minisiteran’ny fahasalamana omaly alahady.
Very andry iankinana
Mahatsiaro very andry iankinana ankehitriny ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy manoloana ny toe-draharaham-pirenena.
Ambanja Matin’ny fitsaram-bahoaka ilay saofera nanitsaka olona 4
Mpamily fiarakodia iray antsoina hoe : Chris Tonis no matin’ny fitsaram-bahoaka tany Ambanja ny faran’ny herinandro teo
Fanomezan-tsiny ny hafa Tandra-vadin-koditry ny fitondrana ankehitriny
Hita ho efa tandra-vadin-koditry ny fitondrana ankehitriny ny fanomezan-tsiny ny hafa, indrindra, fa ny fitondrana teo alohany.
Transparency international -Madagascar “ Avoahy i Jeannot Randriamanana”
Jeannot Randriamanana dia mpampianatra ao amin'ny CEG ao Mananjary. Nanao fanairana izy tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy Facebook momba ny zava-misy iainan'ny mpianatra sy ny fampianarana any Nosy Varika
Fampiakarana karama Lasa mampidangana ny vidim-piainana indray
Toy izay nitranga hatramin’izay dia miantsy vidim-piainana midangana indray ny fampiakarana karama, izay vahaolana,
Fanafihana eto an-drenivohitra Matin’ny polisy tetsy Manjakaray i Ra-Dadafara
Lavon' ny balan'ny Polisy tetsy Manjakaray ra "Dadafara" omaly maraina tokony ho tamin'ny 1ora sy 45 minitra. Raha tsiahivina kely dia kalaza lahy amin'ny fanafihana mitam-piadiana sy fakana an-keriny ity jiolahy iray tratra ity .
Vondrona Eoropeanina Mitaky antoka ara-pampiasam-bola
Notsipihin’ny Ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeanina Giovanni Di Girolamo manokana ny faran’ny herinandro teo fa ny fanavaozana ny antoka eo amin’ny tontolo ara-pampiasam-bola na “climat des affaires”,
Diabe politika Efa azo atao tsara ny fidinana an-dalam-be ?
Mazava ny sary niseho tany Antsiranana ny faran’ny herinandro teo, fa efa malalaka sy azo atao tsara ny diabe ara-politika eny an-dalam-be.
Fampanantenana poakaty Miala bala indray ingahy Filoha
“Tsy vita 2 taona, tsy vita 3 taona ny manarina firenena. Raisiko ary babeko avokoa ny tsy vita rehetra sy fahatarana nataon’ny teo aloha.
Toliara Maty voatifitry ilay jiolahy rain-dahiny
Jiolahy rain-dahiny iray mpikambana ao amin'ny "5 bandes" ao Toliara no maty voatifitry ny hery vonjy taitran'ny Polisy omaly alahady 08 mey tokony ho tamin'ny 1 ora 30 minitra atoandro rehefa avy nanao ny asa ratsiny ka
Andry Rajoelina Tia manamaivana sy manambany ny hafa
Herinandro mahery izay no nanehoan’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, fa tena nametraka ho laharam-pahamehana ny fampianarana ny zaza Malagasy izy, nianatra ny 92% amin’ny zaza Malagasy,…
Vohipeno sy Farafangana Azo hohanina tsara ny lalana
Vita hatreo ny nofy ratsin'ny mponina eto Ambohimanarivo, hoy ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ny sabotsy teo. Vohipeno izay mihosom-potaka hatrany rehefa mivoaka ny trano noho ny haratsian'ny lalana teto,
Tranga hafahafa Zazalahy 7 taona ahiana ho nanolana zazavavy 5 taona
Zava-doza no nitranga tany amin’ny distrikan’i Mahanoro. Zazalahy kely iray vao 7 taona monja mantsy no ahiana ho nanolana zazavavy kely iray vao 5 taona monja.
Faritra Alaotra Hamafa ny dian-dRavalo i Rajoelina ?
Raha tsy misy ny fiovana, hiazo ny faritra Alaotra-Mangoro ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina amin’ity herinandro ity. Manomboka rahampitso talata 10 mey, raha ny vaovao tsy ofisialy.
Filohan’ny fikambanana Ny maha gasy Mangataka didim-panjakana hankalazana ny taom-baovao lohataona
Nandefa taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena, Andry Nirina Rajoelina, ny praiminisitra, ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, ny mpikamban'ny governemanta,
Fidorohana rongony sy fitazonana basy 5 mianadahy, voasambotra tany Mahajanga
Olona miisa dimy ahitana lehilahy efatra sy vehivavy iray no nosamborin'ny Polisin'ny UIR ao Mahajanga ny zoma 06 sy ny sabotsy 07 mey lasa teo
Fifampitoriana ao amin’ny CUA Hiakatra fitsarana anio ireo mpanolotsaina 7
Anio 09 mey amin'ny 11 ora no hiverina hatao fanadihadiana ireo mpanolotsaina 07 mianadahy (1 IRK, 6 TIM). Mandra-pikaton’ny dingana rehetra, dia ambany fanaraha-mason’ny fitsarana.
Fidinan’Antaninandro Tsy nahafehy familiana ilay saoferana Taxi be
Taxibe iray ao amin’ny zotra 134 mampitohy an’Analakely amin’Andohalo no tra-doza ny sabotsy 07 mey maraina teo tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany.
Hajo Andrianainarivelo Tena ho kandida raha ny sary mivoaka
Efa manome sary toa maneho ny tombatombana ny haha kandida Filoham-pirenena amin’ny taona 2023 ny sary asehon’Atoa Hajo Andrianainarivelo sy ny Antoko MMM (Malagasy Miara-Miainga) izay tarihiny.